Maqaalka Jake Rheude ee Martech Zone |
Maqaallada by Jake Rheude
Jake Rheude waa Agaasimaha Suuq geynta Fill Red Stag, oo ah bakhaar fulintiisa ganacsi oo ku dhashay e-commerce. Wuxuu leeyahay waayo-aragnimo sannado badan oo dhinaca ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ah. Waqtigiisa firaaqada, Jake wuxuu ku raaxeeyaa akhriska ku saabsan ganacsiga iyo inuu dadka kale la wadaago khibradiisa.
Kaaliyaha Dukaamaysiga Fudud: Horumarka Weyn ee Soo Socda ee ECommerce?
Khamiis, Juun 11, 2019 Khamiis, Juun 11, 2019 Jake Rheude
Waa 2019 oo waxaad ku dhex socotaa dukaanka tafaariiqda leben-iyo-hoobiye ah. Maya, kani maahan kaftan, intaasna ma ahan feedhka. ECommerce waxay sii waddaa inay qaniinyo ka sii weyn ka bixiso tafaariiqda tafaariiqda, laakiin weli waxaa jira dhacdooyin aan la garanaynin markay tahay xagga hal-abuurnimada iyo ku habboonaanta leben iyo madaafiic. Mid ka mid ah soohdimaha ugu dambeeya waa joogitaanka kaaliyaha dukaanka ee saaxiibtinimada leh, caawimaadna leh. "Sideen kuu caawin karaa?" waa wax aan u baranay inaan maqalno